Asethembe ukuthi i-COVID-19 izohlala: Wellness 4 Humanity
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Impilo » Asethembe ukuthi i-COVID-19 izohlala: Wellness 4 Humanity
I-Wellness 4 Humany ingenye yezinkampani eziningi ezenza imali enkulu ngenxa yalolu bhubhane.
Kungaba okulungile yini ukucabanga ukuthi izinkampani ezinjengePfizer, Moderna kanye ne-Wellness 4 Humanity zifuna ukuthi i-COVID-19 ihlale.
Kodwa ungawasola yini?
Inhlalakahle 4 Ubuntu ithi kuwebhusayithi yayo: “Siyaqonda ukuthi wonke umuntu unezidingo ezihlukene zokuhlola. I-concierge yakho yezempilo izofanela isixazululo esihlukile kuwe. Okuhamba phambili kwethu ukugcina indawo yenu yokusebenza, imicimbi yezinkampani, nemibuthano yomphakathi iphephile.”
Amakhasimende e-Wellness 4 Humanity afaka i-Atlanta Haws Basketball Club, Paramount, Sony, Orangetheory, I-IHG noma Ritz Carlton Ihhotela Cancun.
Itholakala kwenye yezitolo eziphezulu zaseMelika, i- Isikhungo Sokuthenga i-Ala Moana e-Honolulu, Wellness 4 Humanity inikeza isevisi edingekayo edingekayo ngemali enkulu. Bahlinzeka ngensizakalo uhlelo lwezempilo lukahulumeni okufanele luyinikeze mahhala. Bahlinzeka ngesevisi ehamba kancane, ngoba uhlelo lwezempilo lwase-US lugcwele kakhulu.
Impilo 4 Ubuntu bunyathela lapho uhlelo lwezempilo lukahulumeni lwehluleka khona abantu abakwazi ukukhokha izinga eliphezulu.
Ngenkathi ukuhlolwa kwe-COVID Emazweni ase-European Uninion kutholakala mahhala, noma cishe mahhala; kuyilapho ukuhlolwa kutholakala emazweni amaningi ase-Europe ngokushesha futhi yonke indawo, e-Hawaii nakwamanye amazwe ase-United States olayini abade bamahora kanye nezikhathi zokucubungula ezinde zenza ukuhlola kungaphephi nje kuphela, kungasebenzi kodwa ngokuvamile kungenzeki.
Ukusuka eJalimane kuya eGreece izindawo zokuhlola ziyatholakala emakhemisi amaningi. Izikhungo zokuhlola ezinqunyiwe zikuyo yonke indawo. Ukuhlola kumahhala ezakhamuzini noma akubizi lutho kuwo wonke umuntu.
EJalimane ukuhlolwa kwe-COVID-19 kuyadingeka ukuze ungene ezindaweni zokudlela nezitolo noma ngabe ugonywe ngokugcwele. Lokhu akuyona inkinga, ngoba ukuhlolwa kuyashesha futhi kutholakala yonke indawo. Uma umthetho onjalo uqala e-United States, zonke izindawo zokudlela nezitolo ezisele bezingeke ziphile.
E-United States ukuhlola kwamahhala kuyinto enkulu, kuthatha amahora futhi akutholakali ngaso leso sikhathi. Yilapho i-Wellness 4 Humanity nezinkampani eziningi ezifanayo zingena khona.
Ukuhlolwa kwasekhaya akutholakali e-United States, kuyilapho wonke amakhemisi eYurophu anensada yamahhala noma ngaphansi kwama-Euro ayi-10.
Ku-Honolulu Wellness 4 Humanity, inkampani ezimele eyenza inzuzo inikeza isevisi yokuhlola ebizayo, engathengeki abaningi okungenzeka isakaza leli gciwane ngezinombolo ezirekhodiwe ngaphandle kokwazi.
Kwa-Wellness 4 Humanity, Ukuhlola I-Rapid Antibody Test kubiza u-$69 ngemiphumela emizuzwini eyi-10, noma i-Rapid Antigen Test enemiphumela emizuzwini engu-15 nge-$129. Ukuhlolwa kwe-PCR kungabiza cishe u-$299 futhi imiphumela ingathatha izinsuku.
Ukuhlola kuyimali enkulu, futhi Wellness 4 Humanity yenza inzuzo enkulu futhi ithanda ukusebenzela isintu, inqobo nje uma benemali yokukukhokhela.
Iklayenti elanelisekile lithunyelwe kuwebhusayithi Yesintu: Isipiliyoni Esikhulu. Bengingena ngiphuma emizuzwini eyi-10 futhi ngathola imiphumela phakathi namahora ayi-12. Isevisi yekilasi lokuqala!
I-Wellness 4 Humanity kanye nezinye izinkampani eziningi zokuhlola e-United States azinacala, kodwa i-CDC nohulumeni banecala.
Ukuhlolwa akufanele kube yinhlanhla kubantu abacebile. Uma kunjalo i-COVID-19 izoba khona isikhathi eside, eside. Ngeshwa futhi abantu abangenayo imali ephezulu bangathwala futhi basakaze igciwane.
eTurboNews ifinyelele kuzikhulu eziningi ezikhethiwe. Cishe zonke izikhulu azitholakali ukuthi zibambe ucingo, kodwa zizophendula ngencwadi eyisifanekiso esihle ethunyelwe nge-imeyili elandelwa ukungayeki izicelo zeminikelo.
Atlanta Basketball CDC Covid Covid-19 Europe Germany Greece Hawaii Impilo Honolulu Ihhotela I-united states
I-China isabisa abasubathi bama-Olympic 'ngezijeziso ezithile' ngokukhuluma
Amabhizinisi angama-35 agunyazwe kabusha Uhlelo Lwesitembu Lokuhamba Okuphephile lwe-Guam
Ukuhlaziywa kweMakethe yeGlobal Parallel Robotic Gripper eyenziwe...
Ukuxilongwa kwe-Milestone kanye nokwelashwa kobuchopho bezingane...
Uchungechunge olusha lwe-podcast oluphenya ngomsuka we...
I-World Tourism Network VP Ihalalisela Ababhali Ngokusha...
Izindawo zomlando ezisengozini kakhulu zaseMelika ngo-2022
I-European Commission inyusa imali yokugoma ...
Isicelo Esisha Somuthi Wokwelashwa Okubukhali Kwe-Migraine
Uhambo lwe-Intermodal: Uhambo oluphephile nolungenazihibe...
Amathrendi Abalulekile Kwezemfundo Aqhubeka ngo-2022
Sir Richard Branson: Sikrufule, Ake sikwenze!
I-Platinum-Resistant Ovarian Cancer therapy ithola...
Amasheya Aphelele emakethe ye-Particle Board, Ezomlando...
I-Swiss Graubunden ifuna izivakashi eziningi ezivela eGulf...
I-Indian Diaspora Country Tour eya eTrinidad naseTobago...
Amahhotela Sarovar Aqamba Indoda Entsha Ephethe
Umuthi omusha ohlolwayo wokwelapha i-tics evela ku-Tourette...
Ukwelashwa Okusha Kwe-Liver Fibrosis
Ukugunyazwa kwe-FDA Kokwelashwa Okusha kwe-ADHD Kubantu Abadala
I-Jeju Air izibophezela ezindizeni eziningi ezintsha nemizila eya e-Guam
I-Italian Exhibition Group, Q1 2022 idlula okulindelekile
I-Seychelles Iwina Umklomelo Wokuhamba Ohlaza Wase-Italy wango-2022
I-Stellar Line-up ye-Global Game-Changer kwa-IMEX...
I-IATA CO2 Calculation Methodology entsha yethuliwe